युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबारे आयो नमिठो खबर, कसरी घट्यो घटना ? सबै स्तब्ध — Imandarmedia.com
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबारे आयो नमिठो खबर, कसरी घट्यो घटना ? सबै स्तब्ध
काठमाडौं। रुसले युक्रेनमाथिको सैन्य कारवाही दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की लुकेर बसेको बंकरमा रुसी सेनाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको अवस्था बारे शंका- उपशंका हुन् थालेका छन्।
जेलेन्स्की बसेको बंकर ठाउमा निशाना लगाएर रुसी सेनाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। युक्रेनी सेनाको अड्डामा गरिएको उक्त हमलाबाट ठूलो क्षति भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन्।
रुसी सेनाले जेलेन्स्की लुकेर बसेको बंकर पनि पत्ता लगाइसकेको बताइएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्सकी बंकरमा कडा सुरक्षा घेरामा लुकेर बसेका छन्। त्यहीबाट उनले भिडियो बनाउँदै सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
राजधानी किभ पुग्ने विदेशी नेताहरुसँग भेट्ने भन्दा जेलेन्स्की लुक्ने बंकर अलग भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन्। जेलेन्स्कीको सुरक्षामा युक्रेनी सेनाको दुई तीन बिग्रेड नै तैनाथ गरिएको छ।
एन्टीएयर क्रप्ट सिस्टमसहित एन्टी मिसाइल सिस्टम पनि जेलेन्स्कीको सुरक्षामा बंकरमा जडान गरिएएको बताइएको छ। राजधानी किभमा पहिले भन्दा हमला तेज भएपनि रुसले अन्य शहरलाई पहिला कब्जा गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ।
राजधानी किभको सबैभन्दा नजिक रहेको इरपिन सहरमा पनि रुसी सैनिकले हमला गरिररहेका छन्। यो शहर पनि करिब करिब रुसी सेनाको नियन्त्रणमा आइसकेको छ।
केही ठाउँमा सानो संख्यामा रहेका युक्रेनी सेना फाटफुट प्रतिरोध गरिरहेका छन्। रुसी रक्षामन्त्रालयले आफूले पूर्वी युक्रेनलाई मुक्त गर्न चाहेको बताएको छ। उसले अलग राज्य घोषणा गरेका क्षेत्रलाई युक्रेनबाट अलग गराउन लागेको बताएको छ।
यसैबीच मारियोपोलमा रुसी सेनामाथि फाइरिङ गरिरहेको सैन्य जत्था विदेशी नागरिक भएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशी नागरिक भएकाले युक्रेनी जनताको ज्यानसँग कुनै सरोकार नभएको बताइएको छ।
युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेर ठूलो क्षेति हुनलाई रोकेपनि विदेशी सेनाले नमानेको रुसले जनाएको छ। रुसले नेटो र अमेरिकाले लडाइँलाई लम्ब्याउन हतियार दिइरहेको बताएको छ।
आन्तरिक दुर्घटनाका कारण सोभियतकालिन युद्धपोत डुबेकोमा युक्रेनले खुशीयाली मनाइरहेको बेला रुसले एकै पटक पाँचवटा युद्धपोत समुन्द्रमा उतारेको छ। रुसको मस्क्वा जहाज आन्तरिक दुर्घटनापछि आगलागी भएर डुबेको थियो।
भरखरै रुसी सेनाले युक्रेनकी क्रिमिन सहर नियन्त्रणमा लिएको छ। रुसी सेनाले निर्णय हमला गरेसँगै यो शहर पूर्णरुपमा रुसले नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यस्तै यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनका सेनाहरु बहादुर र निडर भएको बताएका छन्।
आफू युक्रेनी सेनाको बहादुरी देखेर अचम्ममा परेको पनि उनको भनाइ छ। उनले अमेरिकी रक्षा सल्लाहकारसँग भनेका छन्,‘युक्रेनी सेनाहरु मेरो सोचभन्दा बढी मजबुत र गर्व गर्न लायक छन्।
हामी साझेदारीको महत्व अहिले बुझिरहेका छौं।’ गतहप्ता अमेरिकाले युक्रेनलाई थप ८० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने जानकारी दिएको थियो।
त्यस्तै, युक्रेनमा आक्रमण थालेको दुई महिना पुगेपछि रुसले शक्ति प्रदर्शन गर्न परमाणु सम्पन्न अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको छ।
सरमत क्षेप्यास्त्रको बारेमा रुसका अनुसार सरमत अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र विश्वकै शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र हो। यो क्षेप्यास्त्र एक महादेशदेखि अर्को महादेश पुग्नसक्छ। यसले दुश्मनको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि मात खुवाउँछ।